Wararka - Genset oo leh Nidaamka Xakamaynta Smart Cloud - La soco Qalabkaaga Markasta Meelkasta
Genset leh Nidaamka Xakamaynta Smart Cloud - La soco Qalabkaaga Markasta Meelkasta
Dhawaan, Kentpower matoor nooca aamusnaanta ah ayaa soo gaadhay goobta macaamilka, mishiinkana waxaa loo adeegsaday awood keyd ah. Sababta ay u awoodeen inay doortaan matoorka KENTPOWER ee la dejiyay waxay ugu wacneyd awooddayada shirkadeed ee xoogga badan, hab maamul sare iyo warshad wax soo saar caqli-sare leh.
Magacyada aad uga dheereeya isla warshadaha marka la eego kharashyada hawlgalka, korantada oo deggan, qiiqa ilaalinta deegaanka, yaraynta buuqa aamusnaanta, iyo xakamaynta caqliga ka dib markii mashiinku meesha yaallo, injineeradeennu waxay ku yaaceen goobta si loo rakibo oo loo hawlgeliyo waqtiga ugu horreeya, si hubi in mashiinka sida ugu dhakhsaha badan loo isticmaalo loona ilaaliyo danaha macaamiisha.
Waxaan hadda kor u qaadeynaa nidaamka adeegga daruurta, kaas oo kuu abuuri doona faa'iidooyin aad u badan adeeggaaga iibka kadib.Taas oo ah, ganacsadaha ama isticmaalaha ugu dambeeya wuxuu ku rakibi karaa barnaamij taleefanka gacanta ee Android si loola socdo howlaha genset.Si wax ku ool ah ayaad u falanqeyn kartaa oo aad u xukumi kartaa sababta fashilka cutubkan durugsan.
Tan waxaa lagu gaaraa iyadoo lagu rakibayo qalabka korontada ku shaqeeya qalabka korontada. Ama waxaad isticmaali kartaa kantaroole noo gaar ah oo la yimaada nidaamka daruurta lafteeda.
Faa'iidooyinka ugu weyn ee adiga laguugu talagalay waa sida soo socota:
1. Keydso kharashka adeeggaaga
2.Hormari waxtarkaaga adeegga
Xulo matoorrada Kentpower, markaa wax walwal ah kama qabtid isticmaalka korontada!